Revolut mizara ka ho 1 andro avy amin'ny fanampiana crypto varotra ny sehatra - Blockchain News
Febroary 26, 2018 Admin
Revolut, ny ara-bola mafy teknolojia monina ao London, namaky na dia ao Desambra voalohany rehefa nanomboka ny asa fanompoana ho an'ny manova fo sy fanaovana cryptocurrencies. Hoy ny orinasa dia nanampy 500,000 mpanjifa tao anatin'ny roa volana, mitondra ny tanteraka ho 1.5 tapitrisa.
Ny efa ho telo taona, dia nanomboka nanolotra bitcoin hentitra sy litecoin tamin'ny fiandohan'ny volana Desambra. Revolut nilaza fa mitombo ihany koa noho ny vokatra vaovao toy ny geolocation Travel fiantohana. manana 350,000 isan'andro mpampiasa mavitrika kokoa noho ny 800,000 mpampiasa mavitrika isam-bolana. (Enim-bolana lasa izay, ireo isa ireo 100,000 ary 600,000, tsirairay avy.)
Revolut hoy ny mpanjifa 'cryptocurrency dia natao ivelan'ny aterineto, fantatra amin'ny anarana hoe mangatsiaka fitehirizana, tamin'ny fitanisàna ny antony fiarovana.
Revolut milaza Izany dia midika hoe sonia ny olona maro araka izay 8,000 mpanjifa vaovao isan'andro ary miomana hanitatra any Etazonia, Aostralia, ary Singapore, amin'ny resaka mandeha avy any India ho any Afrika Atsimo.
Ao amin'ny Reddit AMA amin'ny T ...
Diam lehibe indrindra manerana izao tontolo izao ...
Previous Post:Oil mpamokatra’ consortium notsapaina blockchain miorina amin'ny rafitra hanolo taratasy firaketana ny fitandremana
Next Post:Taiwan ny filohan'ny Banky Foibe mikasa ny hampiasa blockchain
Febroary 26, 2018 amin'ny 7:08 PM
Febroary 26, 2018 amin'ny 7:09 PM
Thank you, I have just been searching for info about this subject for a long time and yours is the greatest I’ve found out so far. Na izany aza, what about the bottom line? Are you positive concerning the supply?
March 5, 2018 amin'ny 8:21 PM
Aprily 22, 2018 amin'ny 9:39 AM
Mey 3, 2018 amin'ny 1:12 AM